ढुक्क हुनुस्, अब लोडसेडिङ हुँदैन «
लेखनाथ कोइराला, कामु कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
चारवर्षे कार्यकाल सकेर कुलमान घिसिङ बाहिरिएपछि अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशक छन्– लेखनाथ कोइराला । ३२ वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत उनी विद्युत् प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । विद्युत् प्राधिकरण नाफामा जानुमा नेतृत्वका हिसाबले कुलमानको जति भूमिका छ, त्यत्तिकै भूमिका कोइरालाको पनि छ । तर, प्राधिकरणभित्र लो स्टाटसमा बसेर काम गर्ने उनी प्राधिकरणको आर्थिक मामिलामा इमानदार र व्यवस्थापनमा काबिल मानिन्छन् । कुलमान बाहिरिएपछि फेरि मुलुकमा लोडसेडिङ हुने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेका बेला उनी अब नहुने ठोकुवा गर्छन् । हाल प्राधिकरणमा निमित्त रहेका कोइरालासँग विद्युत् प्राधिकरण फाइदामा जानुको कारण, यसका लागि भएका प्रयासलगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :
डलरमा पीपीए गरिरहेको खिम्ती आएपछि त प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था अझ बलियो हुन्छ भन्छन् नि ?
पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरण लगानीकर्ताजस्तै देखिन्छ । प्राधिकरणले सबै सहायक कम्पनीहरू बनाएर लगानी गर्दै अघि बढ्न थालेको छ । आफ्नै आयोजना कम छन्, यसले आगामी दिनमा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कस्तो हुने देख्नुहुन्छ ?
प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र सहायक कम्पनी चिलिमेमार्फत विभिन्न आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढाएको छ । यसमा लगानी गरेको छ । सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्दा प्राधिकरणले पीपीए पनि गर्नुपर्छ । कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउँदा छिटो निर्माण हुन्छ भन्ने एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ । अर्को आयोजना बनाउँदा जनतालाई सेयर दिन पनि सकिन्छ । प्राधिकरण आफैंले बनाएको आयोजनामा त दिन सक्दैन । कम्पनी मोडेलमा बनाउँदा सेयर दिन पनि सकियो । निर्णय प्रक्रिया पनि यसमा छिटो हुन्छ । कार्यान्वयन पनि छिटो हुन्छ । यो सकारात्मक नै हो जस्तो लाग्छ । जहाँसम्म आर्थिक अवस्थामा सुधारको कुरा छ, तामाकोसी चालू वर्षमै सम्पन्न हुन्छ । चिलिमेका एक-दुई आयोजना पनि चालू वर्षको अन्तिमसम्म आउन सक्छन् । तामाकोसी आएपछि पनि ऊर्जाको खपत बढ्छ नै भन्ने हाम्रो अनुमान छ । तामाकोसीको पीपीए दर पनि कम छ । विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा यसले धेरै सुधारचाहिँ गर्छ । प्राधिकरण अझै फाइदामा जान्छ । खिम्तीको पनि स्वामित्व आएको छ । यसले झन् प्राधिकरणको फाइदा बढाउँछ ।
निरन्तरता मात्र होइन, अब विद्युत् प्राधिकरणको अवस्था अझै राम्रो हुन्छ । यसका लागि आधार बनिसकेको छ । योभन्दा खराब हुने स्थिति छैन र हामी जाँदैनौं पनि । हाम्रो उत्पादन, वितरण र प्रसारण राम्रो भएर जान्छ । अब नाफा पनि बढी हुन्छ । डेडिकेटेड फिडरको दोब्बर दस्तुर हटाएर पनि हामीले नाफा गर्छांै भन्ने विश्वास छ । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय चल्नेबित्तिकै हाम्रो बिजुली त खपत भइहाल्छ । हामीले जति बिजुली बढी बेच्छौ, त्यति नाफा हुने हो । हामीले सस्तोमा बिजुली किन्ने भनेर भारतसँग सम्झौता पनि गरिसकेका छौं । गत वर्षको अन्तिमतिर हाम्रो खपत घटी भएर केही घाटा बेहोर्नु प¥यो । यदि त्यो अवस्था आएको थिएन भने ११ अर्बभन्दा बढी नाफा गर्न सक्थ्यौं । अहिले त्यस्तो सम्भावना छैन । खपत पनि बढ्दै गएको छ । तामाकोसी आउनेबित्तिकै धेरै सुधार हुन्छ । खिम्ती त आइसक्यो । खिम्तीमा मात्र महिनाको ४०÷५० करोड तिर्नुपथ्र्याे, त्यसमा त आधाभन्दा बढी घट्ने भइसक्यो ।
पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली नकिन्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । उनीहरूले लिऊ वा तिर (टेक अर पे) भन्दा प्राधिकरण लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिरहेकाले समस्या भइरहेको भनिरहेका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
हामीले भारतलाई बिजुली बेच्ने कुरा गरिरहेका छौं, तर व्यापारिक रूपमा त सुरु भएको छैन नि ! आदानप्रदानलाई नै हामीले व्यापार भनिरहेका छौं, होइन र ?
नेपालको बिजुली लागत महँगो भएकाले भारतको बजारमा जान समस्या छ भनिन्छ, कसरी सहज जान सक्ला र ?
विद्युत् आदानप्रदानका लागि अहिले त प्रसारणलाइन निर्माणकै समस्या छ भनिन्छ, यसमा के देख्नुहुन्छ ? यसमा केही पहल भइरहेको छ ?